ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ရနေံစြေးကှကျပကျြစီးရပွီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Banking & Finance/ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ရနေံစြေးကှကျပကျြစီးရပွီလား ? ? ?
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ရနေံစြေးကှကျပကျြစီးရပွီလား ? ? ?
So Shwe April 21, 2020	Banking & Finance Leaveacomment
ပွီးခဲ့သညျ့တနလာင်ျနကေ့ ထှကျပျေါလာသညျ့သတငျးမြားအရ ကမ်ဘာ့ရနေံစြေးကှကျသညျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုကွောငျ့ သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အဆိုးရှားဆုံးအနအေထားကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုကွောငျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအမြားအပွားရဲ့ စီးပှားရေုးလုပျငနျးမြား ရပျတနျ့နရေပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျအထိ ရနေံထောကျပံ့မှုနှုနျးက ရပျတနျ့သှားခွငျးမရှိသောကွောငျ့ အဆိုပါရနေံမြားကို သိမျးဆညျးရနျအတှကျ နရောအခကျအခဲမြားရှိလာပါတယျ။ ရနေံစြေးကှကျလလေ့ာသုံးသပျသူတဈဦးက ရနေံစြေးနှုနျးက လာမယျ့လမြားအတှငျး၌ ယခုထကျစြေးပိုမိုကဆြငျးလာနိုငျကွောငျးလညျး CNBC သို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျရှိ ရနေံစြေးကှကျ၌ ရနေံစြေးနှုနျးက သုညအောကျရောကျရှိသှားခဲ့ပွီး (၃၇.၆၃) ဒျေါလာအထိ အနှုတျပွလာခဲ့သလို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာလအတှငျး ဝယျလိုအားပြောကျဆုံးမှုကွောငျ့ ရနေံသိုလှောငျကနျမြားအတှငျး၌လညျး ရနေံအပွညျ့ကနျြရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ရကျသတ်တပတျအတှငျး ရနေံဝယျလိုအားရှိ၊ မရှိကို အားလုံးက စောငျ့ကွညျ့လကျြရှိပွီး အဆိုပါအကြိုးဆကျက ဇှနျလအထိ ရိုကျခတျနိုငျဖှယျရှိနပေါတယျ။
S&P Global Platts ရဲ့ ကမ်ဘာ့ကုနျပစ်စညျးစြေးကှကျဆိုငျရာအကွီးအကဲ Dave Ernsberger က “အခုကနျြရှိနတေဲ့ ရနေံတှကေ ဇှနျလအထိ သုံးလို့ရပါသေးတယျ။ မဟုတျဘူးဆိုရငျတောငျ မလေအထိပေါ့။ အခုခြိနျမှာ ရနေံစညျတှကေ (၇၀) ရာခိုငျနှုနျး၊ (၈၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ပွညျ့နှကျနပွေီး ဇှနျလအတှကျ စာခြုပျသဈခြုပျဖွဈ၊ မခြုပျဖွဈဆိုတာကို မကွာခငျ သိရတော့မှာပါ။” ဟု မှတျခကျြပေးခဲ့ပါတယျ။ Oklahoma ဒသေသညျ အမရေိကနျတို့ရဲ့ ရနေံသိုလှောငျသညျ့အဓိကစြေးကှကျတညျနရောဖွဈပွီး WTI ရဲ့ စြေးကှကျတနျဖိုးက (၁၀၂) ရာခိုငျနှုနျးကဆြငျးခဲ့သလို Brent ရဲ့ စြေးကှကျတနျဖိုးကလညျး တဈခြိနျတညျး၌ပငျ (၆၅) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ကဆြငျးခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျစှမျးအငျကဏ်ဍသညျလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ (၅၂) ပတျကာလအတှငျး (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးကြျောကဆြငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဇှနျလ၌ ရနေံစြေးပွနျတကျမညျဟူသော မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့ ရနေံမြား ဝယျယူသိုလှောငျထားခွငျးကလညျး အလောငျးအစားဆနျသညျ့ လုပျရပျဖွဈကွောငျး Ernsberger က သတိပေးထားပွီး “ဒီနကေ့စလို့ ဇှနျလအထိ (၈) ပတျတာကာလလောကျက အန်တရာယျရှိတဲ့အခြိနျကာလတှပေါ။ ဒီအခြိနျမှာ ရနေံတှကေို ဝယျယူဖို့ကွိုးစားနသေူတှကေ ဓားရိုးပျေါမှာ မီးနဲ့ဆော့ကစားနတေဲ့သူတှလေိုပါပဲ။” ဟု ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ Brent က ပိုငျဆိုငျသညျ့ ရနေံစညျမြားသညျ တဈစညျကို ဒျေါလာ (၁၉.၈၀) နှုနျးသာတနျကွေးရှိတော့ပွီး Ernsbergr ကလညျး Brent ရဲ့ရနေံမြားသညျ ပငျလယျအတှငျး သှားလာလကျြရှိသညျ့ သဘောင်ျမြား၌ သိုလှောငျထားနိုငျပမေယျ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုအလယျပိုငျးရှိ ကုနျးတှငျးပိတျဒသေမြားမှ ရနေံပိုကျလိုငျးမြားအတှငျး ရနေံသိုလှောငျနိုငျမှုက မကွာခငျပွညျ့တော့မညျဖွဈကွောငျး သတိပေးခဲ့ပါတယျ။
Ernsbergr က “လာမယျ့ မလေကုနျနဲ့ ဇှနျလဆနျးလောကျမှာ သိုလှောငျမယျ့ရနေံစညျတှအေားလုံး ပွညျ့သှားမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။” ဟု ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ ယခုကဲ့သို့ ဝယျလိုအားနညျးနခြေိနျ၌ ရနေံစြေးကှကျအနှုတျပွခွငျးကသဘာဝဖွဈသျောလညျး အဆိုပါအခွအေနမြေားကို အကောငျးဆုံး ပွနျလညျတုံ့ပွနျနိုငျရနျအတှကျ တိကပြွတျသားသောဆောငျရှကျခကျြမြား လိုအပျကွောငျးလညျးဆိုပါတယျ။ ထိုကဲ့မဟုတျပါက လာမယျ့အနာဂတျ၌လညျး ရနေံစြေးနှုနျး ဆကျလကျကဆြငျးနိုငျပါတယျ။
တဈရကျလြှငျ ရနေံစညျပေါငျး (၉.၇) သနျး တငျပို့ရနျ သဘောတူညီခကျြတဈခုကိုလညျး OPEC နဲ့ ရနေံတငျပို့သညျ့နိုငျငံမြားက ရပျဆိုငျးထားပွီး မလေ၌ ရနေံစြေးကှကျလညျပတျနိုငျမညျဆိုပါက သိုလှောငျထားသညျ့ ရနေံမြားမကုနျခငျ၌ပငျ အကြိုးသကျရောကျမှုတဈခုရှိနိုငျမညျဟု ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးကွက်ပျက်စီးရပြီလား ? ? ?
ပြီးခဲ့သည့်တနလာင်္နေ့က ထွက်ပေါ်လာသည့်သတင်းများအရ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးကွက်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အဆိုးရွားဆုံးအနေအထားကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားရဲ့ စီးပွားရေုးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နေရပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ ရေနံထောက်ပံ့မှုနှုန်းက ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိသောကြောင့် အဆိုပါရေနံများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် နေရာအခက်အခဲများရှိလာပါတယ်။ ရေနံဈေးကွက်လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးက ရေနံဈေးနှုန်းက လာမယ့်လများအတွင်း၌ ယခုထက်ဈေးပိုမိုကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းလည်း CNBC သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ရှိ ရေနံဈေးကွက်၌ ရေနံဈေးနှုန်းက သုညအောက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး (၃၇.၆၃) ဒေါ်လာအထိ အနှုတ်ပြလာခဲ့သလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလအတွင်း ဝယ်လိုအားပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ရေနံသိုလှောင်ကန်များအတွင်း၌လည်း ရေနံအပြည့်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ရေနံဝယ်လိုအားရှိ၊ မရှိကို အားလုံးက စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါအကျိုးဆက်က ဇွန်လအထိ ရိုက်ခတ်နိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
S&P Global Platts ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Dave Ernsberger က “အခုကျန်ရှိနေတဲ့ ရေနံတွေက ဇွန်လအထိ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် မေလအထိပေါ့။ အခုချိန်မှာ ရေနံစည်တွေက (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြည့်နှက်နေပြီး ဇွန်လအတွက် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဖြစ်၊ မချုပ်ဖြစ်ဆိုတာကို မကြာခင် သိရတော့မှာပါ။” ဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Oklahoma ဒေသသည် အမေရိကန်တို့ရဲ့ ရေနံသိုလှောင်သည့်အဓိကဈေးကွက်တည်နေရာဖြစ်ပြီး WTI ရဲ့ ဈေးကွက်တန်ဖိုးက (၁၀၂) ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သလို Brent ရဲ့ ဈေးကွက်တန်ဖိုးကလည်း တစ်ချိန်တည်း၌ပင် (၆၅) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည်လည်း ပြီးခဲ့သည့် (၅၂) ပတ်ကာလအတွင်း (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဇွန်လ၌ ရေနံဈေးပြန်တက်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ရေနံများ ဝယ်ယူသိုလှောင်ထားခြင်းကလည်း အလောင်းအစားဆန်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း Ernsberger က သတိပေးထားပြီး “ဒီနေ့ကစလို့ ဇွန်လအထိ (၈) ပတ်တာကာလလောက်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်ကာလတွေပါ။ ဒီအချိန်မှာ ရေနံတွေကို ဝယ်ယူဖို့ကြိုးစားနေသူတွေက ဓားရိုးပေါ်မှာ မီးနဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့သူတွေလိုပါပဲ။” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Brent က ပိုင်ဆိုင်သည့် ရေနံစည်များသည် တစ်စည်ကို ဒေါ်လာ (၁၉.၈၀) နှုန်းသာတန်ကြေးရှိတော့ပြီး Ernsbergr ကလည်း Brent ရဲ့ရေနံများသည် ပင်လယ်အတွင်း သွားလာလျက်ရှိသည့် သဘောင်္များ၌ သိုလှောင်ထားနိုင်ပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလယ်ပိုင်းရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသများမှ ရေနံပိုက်လိုင်းများအတွင်း ရေနံသိုလှောင်နိုင်မှုက မကြာခင်ပြည့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
Ernsbergr က “လာမယ့် မေလကုန်နဲ့ ဇွန်လဆန်းလောက်မှာ သိုလှောင်မယ့်ရေနံစည်တွေအားလုံး ပြည့်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ဝယ်လိုအားနည်းနေချိန်၌ ရေနံဈေးကွက်အနှုတ်ပြခြင်းကသဘာဝဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါအခြေအနေများကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် တိကျပြတ်သားသောဆောင်ရွက်ချက်များ လိုအပ်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။ ထိုကဲ့မဟုတ်ပါက လာမယ့်အနာဂတ်၌လည်း ရေနံဈေးနှုန်း ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ရက်လျှင် ရေနံစည်ပေါင်း (၉.၇) သန်း တင်ပို့ရန် သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလည်း OPEC နဲ့ ရေနံတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများက ရပ်ဆိုင်းထားပြီး မေလ၌ ရေနံဈေးကွက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဆိုပါက သိုလှောင်ထားသည့် ရေနံများမကုန်ခင်၌ပင် အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
Source ~ CNBC
Next တဈကမ်ဘာလုံးကပရိသတျမြားကို အားပေးစကားပွောကွားလိုကျသညျ့ မငျးသားကွီး Arnold